အိန္ဒြာ: သေနေတဲ့ နာရီ
တကယ်ဆို ဒီပန်းချီကားကို သူအဆုံးသတ်သင့်နေပြီ..။
သူက သေနေတဲ့ နာရီပုံတူကို ဆွဲနေတာ..ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ..
အပြင်ကိုသူ ချောင်းကြည့်လိုက်မိပြန်တယ်.. ကြယ်အကြွေတွေ ပြည့်သိပ်နေတဲ့ လမ်းမက အမှောင်ထဲမှာပုံသဏ္ဍန်မပျက်လဲလျောင်းအိပ်စက်နေတုန်း..။
လရောင်ဝါးဝါးမှာ...အရိပ်တွေ တစ္ဆေလို ရှိနေကြတုန်းလား...
ချက်ချင်းဆိုသလို သူ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပုဒ်ဆာလာတယ်..
နောက်...အနံ့တွေမပါတဲ့ လေသန့်စစ်စစ်..လေပြည်တစ်ဝှေ့လောက်... ဟုတ်တယ်..သူတကယ်ကိုဆာလောင်နေခဲ့ပြီ... ဆာလောင်ခြင်းဟာစေ့စေ့စပ်စပ်ကြည့်လေ...နာကျည်းဝမ်းနည်းဖွယ်ရာကောင်းလေပါပဲ.. ဆာလောင်ခြင်းဟာ..စိတ်တွေကို တဆတ်ဆတ်ထိုးဆိတ်နေတဲ့ ငှက်ဆိုးတစ်ကောင်ရဲ့နှုတ်သီးပဲ ဆာလောင်ခြင်းဟာ..သွေးတွေကိုတပွက်ပွက်ပူခြစ်လာစေနိုင်တဲ့ မောင်းနှင်အားပဲ... သူ့အရိုးထဲ ခိုက်ခိုက်တုန်မတတ် အလွမ်းတွေ ကျဉ်စက်တက်လာတဲ့အခါ..
ရထားဘီးတွေ..ခရီးတွေကို စီးပြီး တ၀ှီးဝှီးလည်ပတ်နေကြလား...
ရထားခေါင်းတွဲက အခိုးအငွေ့တွေ...လေထဲမှာ..တိမ်မျှင်တွေလို တန်းနေမှာလား...
သူ့အရိုးထဲ ခိုက်ခိုက်တုန်မတတ် အလွမ်းတွေ ကျဉ်စက်လာပြန်ပြီ..။
အဲဒီ့ ပန်းချီကားဟာ..သေနေတဲ့ နာရီပဲ...
ပန်းချီကားရဲ့နောက်ခံကို သူက အနက်ရောင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်...
ဟုတ်တယ်....အနက်ရောင်.. ပိန်းပိတ်နေတဲ့ အနက်စစ်စစ်အရောင်ပါ..။ အဲသလိုပိန်းပိတ်ခြင်းအနက်ရောင်ထဲမှာ..နာခံရိုကျိုးခြင်းတွေပါနေတယ်..။
နောက်..အနိဌာရုံများစွာကို သပ်သပ်ချေချေ အနှစ်ချုပ်ပြထားလိုက်ခြင်းတွေပါနေတယ်..။
အို...ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းတွေနဲ့..နက်ရှိုင်းတည်ငြိမ်နေတဲ့ ၀ိḩာဉ်တွေပါ ပါဝင်နေတာပါ..။ သြဇာအာဏာနဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိ တွေ သိပ်သည်းမှောင်မိုက်နေစေဖို့ သူအနက်ရောင်ကို ၀ံ့ဝံ့စားစားရွေးချယ်ပစ်ခဲ့တာနေမှာပေါ့ စွမ်းရည်သတ္တိ..စွမ်းရည်သတ္တိ..
သစ္စာခံယူခြင်းသင်္ကေတတွေနဲ့ အပြာတွေက ပြာနေကြတာပါ..။
ကောင်းကင်ကြီးကို ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ အပြာကို သမုဒ္ဒရာကြီးကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့ အပြာကို သူ့ပန်းချီကားထဲက ကြယ်တွေ ကြယ်ကြွေတွေ ရဲ့အရောင်အဖြစ်ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရွေးချယ် ပစ်ခဲ့တယ်..။ အပြာတွေဟာစွမ်းရည်ထက်မြက်ကြတယ်.. အပြာတွေဟာစွမ်းရည်ထက်မြက်ကြတယ်... သူဒီလိုခပ်ဖြည်းဖြည်းရေရွတ်လိုက်မိတယ်....။
နောက် ခပ်မြန်မြန်ကြီး..တရစပ် ရေရွတ်နေမိတယ်... အပြာတွေဟာစွမ်းရည်ထက်မြက်ကြတယ်...အပြာတွေဟာစွမ်းရည်ထက်မြက်ကြတယ်...
အနီရောင်ဟာ..ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားထိခိုက်မှုကို အပေးနိုင်ဆုံး ချစ်ခြင်းတရားတွေတဲ့..
အနုပညာသမားဆိုတာ..အရာရာကိုချစ်တတ်ခြင်း.စိတ်ဝိဥာဉ်အတွက် သူတို့နှလုံးအိမ်တွေကို အမြဲတမ်း.ရှုင်းလင်းသန့်စင်ထားခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တယ်..
ကျွန်တော့ချစ်ခြင်းတရားတွေထဲမှာ အမှန်တရားက နံပါတ်စဉ် တစ် မှာပါခဲ့တယ်..
အမှန်တရားကို ချစ်ခင်ခြင်းဟာ..အမှားတွေကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းစိန်ခေါ်ပွဲတစ်ခုပေါ့..
စိတ်ချ..ကျွန်တေ်ာ့ခရီးက အမှန်တရားနဲ့စခဲ့လို့ အမှန်တရားနဲ့ အဆုံးသတ်မှာပါ...
ချစ်သူ့ရဲ့ နာကျည်းအံကြိတ်သံတွေ ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်နေပြီလား...
အမေ....အမေ...လို့ သူ့တမ်းတသံတွေကို...နောက် သူရဲ့ ငိုကြွေးခြင်းကို သူက သူ့မျက်ရည်တွေနဲ့မပေါ့ပျက်စေလိုဘူး....
သူဟာတကယ့်ကို အလွမ်းတွေနဲ့ခိုက်ခိုက်တုန်နေခဲ့ပါပြီ... ဘာ..မှာမမြင်နိုင်တဲ့အရပ်ကိုမျှော်ကြည့်နေခြင်းဟာ..အရာရာပဲ..
ဘာ..မှ မရှိတဲ့ ရှုမျှော်ခင်းတွေဟာ..အရာရာပဲ... အဲဒီ့အရာရာတွေကို စုစည်းထုတ်ပိုးပြီး..
ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ ဖြစ်ခဲ့ ပျက်ခဲ့ သမျှ အခင်းအကျင်းတွေကို.ရောစပ်ပြီး.
ဒီ့ထက်စိတ်ပျက်ညစ်ညူးဖွယ်ရာမရှိတော့တဲ့ ဆက်တင်ကို..သူက စုတ်ချက်ခပ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ သရုပ်ဖေါ်ကြည့်ရပါဦးမယ်..
ဒီပန်းချီကားချပ်ရဲ့ကောင်းကင်ကို သွေးခြည်နည်းနည်းဥပေးပြီး.. ဒီပန်းချီကားချပ်ရဲ့..ထောင့်စွန်းမှာ..ဆာလောင်ခြင်းသစ်ပင်ကို
သူက ဒီပန်းချီတစ်ချပ်နဲ့တင်.. သရုပ်ပေါ်ပီပြင်အောင် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ရေးဆွဲရပါလိမ့်မယ်...
သူက သူ့ဆုံးရှုံးခြင်းတွေရဲ့ တန်ရာတန်ကြေး နီးပါးအတိုင်း ဒီပန်းချီကားကို ရင့်ရင့်ရိုင်းရိုင်း ရေးဆွဲရပါလိမ့်မယ်... ဒီပန်းချီကားထဲမှာ..သူ့ရဲ့သေနေတဲ့ နာရီကို အဓိက အသားပေးပြီး..စူးစူးရှရှရေးဆွဲရပါလိမ့်မယ်.. ဒီပန်းချီကားချပ်ထဲမှာ..လှောင်ပိတ်မွန်းကြပ်နေတဲ့ အခန်းအိုအိုတစ်ခုရဲ့ ရနံ့ကို စနစ်တကျဆေးဖျော်စပ်ပြီးကြေကြေကွဲကွဲ ရေးဆွဲရပါလိမ့်မယ်.. အစိမ်းရောင်ဆေးဖျော်ခွက်ကို အဝေးဆုံးမှာရွှေ့ထားပြီး ဒီပန်းချီကားကို သူက နာနာကျည်းကျည်း ရေးဆွဲရပါလိမ့်မယ်..
နောက် အနာတရအမျိုးမျိုးနဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ပျက်ယွင်းစပြုနေတဲ့ သူ့နှလုံးသား ပုံတူတစ်ခု နောက်..ဘယ်တော့မှ..မကျက်နိုင်လောက်အောင်..လှိုက်စားကိုက်ခဲနေခဲ့တဲ့...
စိတ်ဒဏ်ရာတွေ.. အားလုံးကို အနုစိပ်သရုပ်ပါအောင် သူဆွဲပြရပါလိမ့်မယ်....
သူက ဒီပန်းချီကားချပ်ထဲက သက်ငြိမ် သရုပ်ဆောင် လက်စသတ်ရမယ်...။
သူ ပဲ လက်စသတ်ရလိမ့်မပေါ့...ဒီပန်းချီကားကို.....
မျှော်လင့်ချက်ဆို တာ ဘယ်တော့မှမညှိူးတတ်တဲ့ ပန်းတွေပါ...
ခုတိုက်ခတ်နေတဲ့ လေပြည်မှာ ကြယ်နံ့တွေ..တောင်ပါလာသလိုလို...
ယုံကြည်ချက်ဆိုတာ..နေရောင်မှာ တစ်ဖျတ်ဖျတ်လက်ဖြာနေတဲ့ ဓါးသွားတစ်လက်.
သစ္စာတရားဟာ..သိပ်ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် ထက်မြက်စူးရှတဲ့ လက်နက်..။
အမှောင်တွေဟာ..အလင်းရောင်ကို အကြားအလပ်မရှိ လက်နက်ချစွန့်ခွာသွားကြသလိုမျိုး...ရောင်နီဟာ..လှလှပပကို..ဖြာလင်းလာဦးမှာပါ...လေ
သူ့ခွန်အား.အချိန်.ဇွဲသတ္တိ ချစ်ခြင်းတရား..ḩာဏ်ပညာ..ယုံကြည် မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အရာရာ...
သူပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ အရင်းအနှီးတွေ မနည်းပဲ...။ နည်းမှမနည်းပဲ ။
သေနေတဲ့ နာရီ ပန်းချီကားကို...သူ......အဆုံးသတ်ရမယ့်နေ့....
ခုတိုက်ခတ်နေတဲ့ လေပြည်မှာ ကြယ်နံ့တွေ..တောင်ပါလာသလိုပါလား.
အင်းးးး ............................................. .......................
ရထားခေါင်းတွဲက အခိုးအငွေ့တွေ...လေထဲမှာ..တိမ်မျှင်တွေလို တန်းနေမှာလား... ရထားဟာ..အရှိန်နည်းနည်းလျှော့လိုက်ပြီလား...
ဟုတ်တယ်... သေနေတဲ့ နာရီပေါ့..အဲဒီ့ပန်းချီကား..ဟာ
ဒါပေမယ့်.. အမှန်တရား..နင်းထားတဲ့ အရပ်ဟာ...အောင်မြေ..ပါ။
ဝတ္ထု ကောင်းလေးပဲအစ်မ ..
ပန်းချီကား တစ်ချပ်ရဲ့ အဆုံးသတ် ..
ခရီး တွေ မဆုံးသေးသမျှ ...
သေနေတဲ့ နာရီ ဆိုတဲ့ ပန်းချီကား
အိန္ဒြာက အိန္ဒြာဖြစ်ဖို့ ဟိုးအဝေးကြီးက လာခဲ့ရတယ်။ နားထဲမှာ ဆူညံနေတာပဲ။ ရော့ခ် ရော့ခ်။
ဒီ ဂီတကို ရပ်နားသင့်ပြီ။
ပြာနေတဲ့ အပြာက ပြာကိုင်ရင် ကျွဲနွဲ့ပေါက်တတ်တယ်တဲ့ ပြာပြာသလဲ လွှတ်ချလိုက်တဲ့အခါ ဖြာထွက်သွားတဲ့ အပြာက အပြာရင့်ရောင်မဟုတ်တဲ့ အပြာနုနုလေး။
(ဒါနဲ့ စကားမစပ် ခင်ဗျား ကျွန်တော် အောင်ခဲ့တဲ့ မြေကို နင်းထားတယ် နည်းနည်းရွှေ့ပေးပါ။)
အမှန်တရားက ခြောက်ကပ်ကပ်နဲ့ ရယ်သွားတယ်။
မပြီးသေးတဲ့ ပန်းချီထဲက အရောင်တွေဟာ အသွေးကြွလွန်းလို့ ရင်ထဲထိ လာစင်တယ်။
ခက်ဆစ်အဖွင့်လေးတွေကလည်း အရမ်းလှတာပဲ မရယ်။
ပြီးတော့ အနုပညာသမားဆိုတာ..အရာရာကိုချစ်တတ်ခြင်း.စိတ်ဝိဥာဉ်အတွက် သူတို့နှလုံးအိမ်တွေကို အမြဲတမ်း.ရှုင်းလင်းသန့်စင်ထားခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တယ်... ဆိုတာလေး အလွတ်ကျက်သွားပါတယ် မ ။
ကဗျာတပုဒ်လိုလှပနေတဲ့ ၀ါကျတွေနဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့ စာလေး ခံစားကြည့်ရင်း မပြီးနိုင်တဲ့ ပန်းချီကားတွေရေးဆွဲနေတဲ့ တစုံတယောက် ကို မြင်ယောင်လာမိတယ်
ခွင့်လွတ်ပါ..၊ ကျနော့်အမြင်နဲ့ ရင်ဘတ်ထဲထိုးဖေါက်မှုကို ရေးဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါ၊ ပြသနာက ဆန္ဒမရှိရင်မလုပ်တတ်တဲ့ ကျနော်ကို သူ့တော့
ရေးမပေးလို့ ငါ့တော့ ရေးမပေးလို့ ဆိုပြီး စကားနာလာလာထိုးကျတယ်ဗျာ၊
ကျနော်ပင်ကိုစိတ်က စာသမားဆို သိတ်ချစ်တတ်တာပါ၊ ကျနော့်အကောင့်မှာ ကျနော့်ကောင်မလေးကလွဲရင် ကျန်တာအားလုံး
စာပေသမားတွေပဲရှိပါတယ်၊တချို့က ကျနော်ဘယ်သူလဲဆိုတာ သိမှာပါ၊ဒါတွေက ပြီးခဲ့ပြီမဟုတ်လား၊ စိတ်အထိခိုက်ဆုံးက ကျနော်ညီလေးလို ချစ်တဲ့ ဘလောဂါ တယောက်က မန့်မရေးပေးရင် သေခန်းပြတ်တဲ့ဗျာ၊ ဒါဟာဖြစ်သင့်ပါရဲ့လား၊
ကျနော့် မန့်က ရေးထားတဲ့စာတွေကို ပိုပြီးဘာမှ မကောင်းနိုင်ပါဘူး၊ အရင်ကဆို သူများမန့်ထားတာတွေ ဘာမှကိုမဖတ်တာ၊
သတိပြုစေချင်တာက ဘလော့ဆိုတာ ဘောလုံးပွဲတပွဲလို မှားသည်ဖြစ်စေမှန်သည်ဖြစ်စေ ပွဲအဖြေက
တချို့တွေက (၁)ကနေ (၂၀)လောက်အထိ
ဒါဟာ စာရေးသူအတွက် မန့်အရေအတွက်မှာ
ကိန်းတွေတက်ပြီး ပိုကောင်းအောင်ဖန်တီးချင်စိတ်လျော့စေနိုင်ပါတယ်၊ တခုက အဲလောက်ရေးနိုင်တာ လေးစားမိပါတယ်၊ဒါပေမဲ့ဗျာ..............
အစ်မရေ... ခံစားမိတယ်... ။